E-News Nepali || Fast and Accuracy » घर हिँडेका मजदुरलाई माथिको आदेश भन्दै राजमार्गमै रोकियो
घर हिँडेका मजदुरलाई माथिको आदेश भन्दै राजमार्गमै रोकियो
धादिङ — भक्तपुर र बूढानीलकण्ठमा घर निर्माण गर्ने मजदुरहरू पृथ्वी राजमार्गमा अलपत्र परेका छन् । बिहीबार बिहान ३ बजे उपत्यकाबाट पैदल बर्दिया राजापुर जान हिँडेका ६ महिलासहित ४० जनाको समूह कलंकीबाट नारायणगढ जाने ट्रकमा चढेका थिए । बिहानै गल्छी पुग्‍नासाथ प्रहरीले ट्रकलाई काठमाडौं फर्काएको थियो ।
ट्रकमा चढेका मजदुर भने नौबिसे खानीखोलामा ओर्लिएका थिए। ट्रकमा रहेको रावल चौधरीको समूह २० किलोमिटर हिँडेर गल्छी नपुग्दै भल्टारमा हेटौंडा जाने ना. ६ ख. १६३४ नम्बरको ट्रकँसग नारायणगढसम्मको २० हजार भाडा तिर्ने सहमति भयो।
गल्छीसम्म पैदल आउने अनि प्रहरी बिट कटेपछि ट्रकमा चढ्ने सहमति भएको थियो। उनीहरू करिब २ किलोमिटर हिँडेर गल्छीबजार कटे। तर,ट्रकको अत्तोपत्तो थिएन। चालकले मोबाइल स्वीचअफ गरेर भागे। हिँडेरै बर्दिया जान लागेको उक्त समूहलाई प्रहरीले लाठी प्र हार समेत गरेको थियो। उनीहरू भागेर मासटार आएर बिसाए।
लकडाउन लम्बिएपछि यतिखेर पृथ्वीराजमार्ग पोका पन्तुरा बोकेर घर जान हिँडेका यात्रुले भरिएको छ। विभिन्‍न उमेर समूहका भारी बोकेकाहरू पश्चिम नेपाल जान हिँडेका छन्। पैदलयात्रुलाई पानी,खाजा र खानाको भने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रहरी रहेका ठाउँमा भने दुर्व्य वहार भएको उनीहरू बताउछन्। थांक्रे महादेवबेँसीस्थित शिक्षक रामचन्द्र रुपाखेती भन्छन्, ‘हामीले स्थानीयस्तरमा सहयोग जुटाएर अशक्त तथा भोकले हिँडन नसक्नेहरूलाई बोलाएर खाना र खाजा दिएर पठाएका छौं।
यसरी पैदल यात्रा गरिरहेकामा उपत्यकाका र नुवाकोट, धादिङका ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने मजदुर छन्। भूकम्प पछि पुनर्निर्माणको काममा वाग्मती प्रदेश आएका पश्‍चिम नेपालका हजारौं मजदुर यतिखेर घरजान लर्को लागेका हुन्।
प्रकाशित मिति ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०४:१८